सबैका आ–आफ्नै च्वाइस हुन्छन् । सबैको च्वाइस मिल्नैपर्छ भन्ने छैन । केही सेलिब्रिटीका च्वाइसहरु :
नम्बर १ नङ्सल
नङ्सल । यस तामाङ शब्दको अर्थ ‘ज्योति’ हो । भोजपुरका दानबहादुर तामाङलाई छोरी नङ्सल कडा स्वभावकी लाग्छिन् । ‘कडा व्यवहारकी छिन्,’ छोरीबारे उनले भने ।
काठमाडौंको मुटु ठमेल । ठमेलको मुटुचाहिँ कुन ठाउँ होला ? होटल आर्ट काठमाडौंको नौ तलामाथि छानामा पुगिहाल्नुभयो भने, ठमेलको मुटु सात घुम्ती पस्ने त्यही चाक्सीबारी मार्ग लाग्नेछ । जहाँ उभिएको छ क्यानभास र मोर्डन आर्टले सजिएको आर्ट काठमाडौं ।
एसएलसी सकेर प्लस टु गर्न राजधानी छिरेका थिए, सुदूरपूर्वी काँकडभिट्टाका अभय (म्याक्स) पोख्रेल । उनी सुकेधाराको वाग्मती मोडर्न कलेजबाट होटल म्यानेजमेन्टमा प्लस टु सिध्याएपछि ब्याचलर गर्ने योजनामा थिए । यसैबीच उनी देश चिनाउने अभियानतर्फ मोडिए ।
एमटीभी अन–प्लग्ड, फेरि फर्कंदै छ । कुनै समय थियो, यो कार्यक्रमले खुबै वाहवाही लुटेको । धेरै अगाडिसम्म एमटीभी जेनेरेसन भनिन्थ्यो, नयाँ पुस्ताको परिचय दिन । यही एमटीभीले तयार पारेको एउटा बेजोड कार्यक्रम हो, अन–प्लग्ड ।
सर्कस ∕ जब यो शब्द सुनिन्छ, आङ नै सिरिंग हुन्छ । किनभने दसौं हजार नेपाली बालबालिका भारतको सर्कसमा फसेका छन् । अर्को कारण : सर्कसमा पर्फरमेन्स पनि त्यस्तै खालको हुने गर्छ, जुन कला धेरैले गर्न सक्दैनन् ।
निश्चल र आशिफको परीक्षा
‘लुट’ बाट निर्देशकका रूपमा उदाएका निश्चल बस्नेत अचेल निर्देशक कम हिरो ज्यादा लाग्न थालेका छन् । गीत गाउने, नाच्ने सबैमा आफूलाई पस्किसके र सफलता पनि पाए । गेस्ट रोलदेखिको उनको अभिनय यात्रा यतिबेला ‘दुई रुपैयाँ’ सम्म आइपुग्दा मुख्य कलाकार नै भएका छन् ।
शरीर स्क्यान गर्ने क्यामेरा !
वैज्ञानिकहरूले मानिसको शरीर स्क्यान गर्न सक्ने क्यामेराको निर्माण गरेका छन् । युनिभर्सिटी अफ इडिनवर्गका वैज्ञानिकहरूले यस्तो क्यामेराको निर्माण गरेका छन् ।
आइफोन एटमा वायरलेस चार्जिङ
एप्पलले आफ्नो नयाँ आइफोन यसै साता (सेप्टेम्बर १२) मा सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले आइफोन सार्वजनिक गर्नुअघि भएको ‘लिक’ अनुसार आइफोनमा वायरलेस चार्जिङको सुविधा हुनेछ ।
इन्स्टाग्राम स्टोरी वेबमा पनि
इन्स्टाग्रामले स्टोरी फिचर आफ्नो प्रतिस्पर्धी स्न्यापच्याटबाट कपी गरेको थियो । तर, इन्स्टाग्रामको स्टोरी फिचर प्रयोग गर्नेको संख्या स्न्यापच्याटको भन्दा धेरै भएको छ । यो फिचर लोकप्रिय भएपछि इन्स्टाग्रामले मोबाइलमा मात्रै उपलब्ध यो फिचर वेबमा पनि ल्याउने भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउने खालको सामग्री कसरी रोक्ने ? मानिसको मृत्युपछि एकाउन्ट के हुन्छ ? सोसल मिडिया कम्पनीहरू मिडिया कम्पनीजस्तै हुन् कि होइनन् ?
अव्यवस्थित सहरीकरण नियाल्दै आइरहेका कसै–कसैलाई काठमाडौंको मध्यविन्दुबाट पूरै उपत्यका आँखाले हेर्न असम्भव लाग्न सक्ला । तर, यो कल्पना सम्भव छ है । पत्याउनु भएन भने, ठमेलको मल्बेरी होटलमा पुग्नुहोस् । त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यले तपाईंलाई लठ्ठै बनाउनेछ ।
काठमाडौंको फेसन दुनियाँ पनि चलायमान छ । हरेक साता शोहरू भइरहेको हुन्छ । याक एन्ड यतीमा शनिबार सम्पन्न रिपोरेन्जा डिलामोडा अर्थात् सेलेब्रेसन अफ फेसन वास्तवमा नयाँ डिजाइनरहरूको परीक्षा थियो ।
फुटबलका ५ महँगा ट्रान्सफर
नेयमार, ब्राजिल२२ करोड २० लाख युरोबार्सिलोना → पेरिस सेन्ट जर्मेन (२०१७)